Tag: Madoobe | Sagal Radio Services
Axmed Madoobe oo u yeeray xubnaha Jubbaland ugu jira Aqalka sare
Sagal Radio Services • News Report • October 3, 2017
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa u yeeray Xubnaha Aqalka Sare ee laga soo doortay Jubbaland, si ay uga qeyb galaan shirka maamul goboleedyada ku yeelanayaan magaalada Kismaayo.
Axmed Madoobe oo khudbad saameyn badan ka jeediyay calleemo saarkii madaxweynaha Galmudug Video
Sagal Radio Services • News Report • May 30, 2017
Sagal Radio Services • News Report • February 9, 2017
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha la doortey ee Soomaaliya Maxamed Cabadullaahi Maxamed Farmaajo.
Axmed Madoobe oo C/Welli Gaas iyo Guuleed ka dalbaday inay nabadda Gaalkacyo ka shaqeeyaan
Iyadoo dagaalada magaalada Gaalkacyo ka dhacaya maalmo badan qaateen, ayaa waxaa kordhaya baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug.
Axmed Madoobe “Waa in arrinta Hiiraan si deg deg wax looga qabtaa, dagaalka socdana la joojiyaa”
Sagal Radio Services • News Report • May 24, 2016
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaada ka aloosan magaalada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay ay ku dagaalamayeen labo maleeshiyo beeleed.
Axmed Madoobe “Waxaan qaadi doonaa dagaal ka dhan ah Al-Shabaab” (Sawirro)
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo shalay kormeeray xerooyin ciidan oo ku yaal magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku jiraan Ciidamada isku dhafka ah ee dhowaanahan tababarka u socday iyo Ciidamo ka tirsna Maamulkiisa.
Axmed Madoobe “Shirka ugu dambeeya ee go’aanka lagu gaarayo Kismaayo ayuu ka dhacayaa”
Sagal Radio Services • News Report • January 20, 2016
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in Kismaayo lagu gaari doono go’aanka ugu dambeeya ee shirka Madasha wada tashiga qaran ee looga hadlayo hanaanka doorasho ee Soomaaliya.
Axmed Madoobe “Safarkeyga Cadaado waxay qeyb ka tahay dhameystirka heshiiskii Gaalkacyo”
Sagal Radio Services • News Report • January 7, 2016
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe ayaa sheegay in ujeedada socdaalkiisa Cadaado ay qeyb ka tahay dhameystirka heshiiskii Gaalkacyo ee lagu soo afjaray colaadii u dhaxeysay Maamulada Puntland iyo Galmudug.
Axmed Madoobe “Fikirka ay Kenya Soomaaliya u soo gashay, ma ahan inay dhul qaataan, Amnigooda qatar ku jira”
Sagal Radio Services • News Report • November 14, 2015
Sagal Radio Services • News Report • October 20, 2015
Axmed Madoobe oo Xil culus u magacaabay mid kamid ah Saraakiishii maamulkiisa Mucaaradka ku ahaa
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Mdaxaweynaha Maamulka Jubbaland Sheekh Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa lagu magacaabay Taliyaha Ciidanka Jubbaland ee Gobolka Gedo, waxaana xilkaasi loo magacaabay Korneel Cabaas Ibraahim Gurey.
Axmed Madoobe “Anaga Soomaali midnimadeeda ka shaqeyneynaa ee ma noqoneyno kuwo…”.
Sagal Radio Services • News Report • August 2, 2015
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay khilaafka maamulkiisa iyo dowladda Federaalka u dhaxeeya, isagoo xusay in arrinta la isku hayay ay aheyd tan guddiyada ay magacawday dowladda Federaalka.
Axmed Madoobe “Baarlamaanka waxay kala garan la’yihiin cida ay Mas’uulka ka yihiin iyo shaqadooda”
Sagal Radio Services • News Report • May 24, 2015
Madaxweynaha Maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa ku eedeeyay Baarlamaanka Federaalka inay shaqadooda ku soo koobantay mooshin iyo iska daba wareeg, isagoo ka digay meel marinta mooshinka ka dhanka ah dhismaha Baarlamaanka Jubba.
Axmed Madoobe oo taageeray Maamulka saddexda Gobol ee lagu dhisayo Baydhabo
Sagal Radio Services • News Report • February 12, 2014
Hogaamiyaha Maamulka KMG ah ee Jubba Axmed Madoobe ayaa taageeray Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ee qorshihiisa yahay in saddex gobol lagu dhiso, iyadoo shir kale oo lagu dhisayo lix gobol uu ka socdo magaalada Baydhabo.